Waa kuma Baraabbas, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland (WKG)
Dhammaan afarta Injiil waxay sheegaan shaqsiyaadka noloshooda waxyar iska badalay kulan kooban oo lala yeeshay Ciise. Kulamadan ayaa lagu duubay dhowr aayadood, laakiin muuji hal dhinac oo nimco ah. "Laakiin Ilaah wuxuu muujiyaa jacaylkiisa uu inoo qabo xaqiiqda ah in Masiixu innaga u dhintay markii aan weli dembilayaal ahayn" (Rooma 5,8). Baraabbas waa qof sidan oo kale ah oo awoodi kara inuu la soo dego nimcadan si gaar ah.
Waxay ahayd xilligii Iidda Kormaridda Yuhuudda. Baraabbas wuxuu ku jiray xabsi wuxuuna sugayay in la dilo. Ciisena waa la qabtay oo wuxuu hor taagnaa Bilaatos Bilaatos hortiisa. Bilaatos waa ogaa in Ciise aanu dambi lahayn dembiyada lagu soo oogay, oo wuxuu isku dayay khiyaano inuu isaga ku soo daayo. "Iiddaas, si kastaba ha ahaatee, guddoomiyaha wuxuu caado u lahaa inuu siidaayo maxbuus dadka ay iyagu doonayaan. Laakiin waagaas waxay lahaayeen maxbuus caan ah oo la yiraahdo Ciise Baraabbas. Markay isu yimaadeen, Bilaatos ayaa ku yidhi, Kumaad doonaysaa? Kumaan idiin sii daayaa, Ciise Baraabbas ama Ciise kan Masiixa la yidhi? (Matayos 27,15: 17).
Markaasaa Bilaatos wuxuu xukumay in loo yeelo waxay weyddiisteen. Wuuna sii daayay kii lagu xukumay rabshad iyo dil, oo Ciise u gacan geliyey doonistii dadka. Markaasaa Baraabbas laga badbaadiyey dhimashadii oo iskutallaabta lagu qodbay meeshuu u dhexeeyey laba tuug. Waa kuma Ciise Baraabbas binu aadam ahaan? Magaca "Bar abba [s]" waxaa loola jeedaa "ina aabbaha". Johannes wuxuu si fudud uga hadlayaa Baraabbas inuu yahay "wax dhaca", maahan qof u dumiya guri sida tuug, laakiin waa nooc ka mid ah burcadnimada, ganacsatada, iyo kuwa boobaya, kuwa wax dumiya, dumiya oo ka faa'iideysta baahiyaha dadka kale. Baraabbas wuxuu ahaa nin aasaas leh.
Kulankan gaagaaban wuxuu ku dhammaanayaa siidaynta Baraabbas, laakiin wuxuu ka tagayaa su'aalo xiiso badan, oo aan laga jawaabin. Sidee ayuu ugu noolaaday inta ka hartay noloshiisa kadib dhacdada layaabka leh? Weligiis kama fikirin dhacdooyinka Iidda Kormaridda? Miyay taasi ka dhigtay inuu beddelo qaab nololeedkiisii? Jawaabta su’aalahan wali waa qarsoodi.
Bawlos muu la kulmin iskutallaabta iyo sarakicidda Ciise qudhiisa. Wuxuu qoray: "Ugu horrayn, waxaan idiinku soo gudbiyay wixii aan helay oo kale: in Masiixu u dhintay dembiyadeenna sida Qorniinku leeyahay, iyo in isaga la aasay iyo in maalintii saddexaad la sara kiciyey Qorniinka ka dib" (1 Korintos 15,3: 4). Waxaan ka fikirnaa dhacdooyinkan udub dhexaadka ah ee caqiidada masiixiga gaar ahaan Ciidda Masiixiga. Laakiin waa ayo maxbuuskan la sii daayay?
Waxaad tahay maxbuuskan la sii daayay. Jeer isku mid ah xumaanta, isla jeermiga nacaybka, iyo isla jeermigii fallaagada ee ku soobaxay nolosha Ciise Barabbas ayaa iyaguna qalbigaaga ku dhex dhacaya. In kasta oo ayan caddayn midho xun noloshaada, haddana Ilaah si cad ayuu u arkaa: "Waayo, mushahaarada dembigu waa dhimashada, laakiinse hadiyadda Ilaah waa nolosha weligeed ah ee laga helo Rabbigeenna Ciise Masiix." (Rooma 6,23).
Sideed ugu noolaan lahayd noloshaada inta ka hadhay iftiinka nimcooyinka lagu muujiyey dhacdooyinkan? Marka la barbardhigo Baraabbas, jawaabta su’aashani maahan hal qiso. Aayado badan oo ku jira Axdiga Cusubi waxay bixiyaan mabaadi'da wax ku oolka ah ee nolosha Masiixiyiinta, laakiin jawaabta ayaa u badan sida ugu wanaagsan ee uu Paul ku soo koobi karo warqaddiisa uu u diray Tiitos: "Waxay u muuqatay nimcadii Eebbe ee bogsatay dadka oo dhan waxayna ina baraysaa inaan diidino cibaado la'aanta. iyo damacyada dunida iyo kuwa caqliga leh, oo xaq ah oo cibaado leh ayaa ku nool adduunkan oo suga suga barakada iyo muujinta ammaanta Ilaaha weyn iyo Badbaadiyeheenna, Ciise Masiix, kan naftiisa nafteenna u bixiyey si uu inaga furto xaqdarrada oo dhan iyo dad baa naftooda u nadiifiyey hanta ay jecel yihiin in ay qabtaan camal wanaagsan " (Tiitos 2,11-14).